राजनीति Archives - Page 8 of 10 - Bagaicha.com
शेरधन राई मुख्यमन्त्री बन्ने
काठमाडौं प्रदेश नम्बर १ मा शेरधन राईलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ। एमाले प्रदेश नम्बर १ को संसदीय दलको नेतामा राई र आचार्यबीच सहमति हुन नसकेपछि संसदीय दलको नेता छान्न शुक्रबार भएको चुनावमा राईले २६ मतका साथ विजयी भएपछि मुख्यमन्त्रीको लागि उनी पक्का भएका हुन्। राईले एमाले सचिव भिम आचार्यलाई हराए। आचार्यले २४ मत प्राप्त गरे भने १ मत बदर भएको थियो। नाव भएको थियो।...
२६ माघ, काठमाडौं । आगामी सरकार गठनको विकल्प, प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन परिणामको लेखाजोखा, सरकारलाई बजेट अपुग भएको, बजेट अपुग हुँदाहुँदै पनि आर्थिक सहायताको नाममा रकम वितरणको गृहकार्य भइरहेको जस्ता विषयबस्तुहरु परेका छन् । एमाले र माओवादीको पार्टी एकतामा सकस परिरहेको र विदेशी अपराधीबाट फैसलाअनुसार जरिवाना असुल्न सरकारले नसकिरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पदबाट राजीनामा नदिने बत...
बेइमानीबाट भोगेको महासंकट
माघ २६, २०७४, काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका विचारवान नेता रामचन्द्र पोखरेलको माघ २५ को लेख ‘कांग्रेसको महासंकट’मा धरातलीय यथार्थ समेटिएको छ । नेतृत्वबाट गल्तीमात्र होइन, बेइमानीका कारण यसपालीका सबै निर्वाचनमा कांग्रेसले अभूतपूर्व पराजय भोग्नुपरेको तितो यथार्थलाई उहाँले आत्मसात गर्नुभएको छ कि छैन ? स्पष्ट भएन । गल्ती गर्न पाइन्छ, तर बेइमानी गर्न पाइँदैन । गल्ती पनि दोहोर्‍याउन पाइँदैन । पार्ट...
राजीनामा दिने तयारीमा प्रधानमन्त्री
२५ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फागुन पहिलो साता राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् । आफ्नो नेतृत्वमा सबै निर्वाचन सम्पन्न भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई संघीय संसद्को अन्तिम नतिजा बुझाएलगत्तै उनले राजीनामा दिन लागेको छन् । राष्टियसभा निर्वाचनको परिणाम बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राजीनामा दिने तयारीमा लागेका छन् । प्रधानमन्त्री राजीनामा दिने तयारीमा छन् । ...
राष्ट्रियसभामा पनि वाम गठबन्धनको बहुमत
२५ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा पनि एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनको प्रष्ट बहुमत आएको छ । तर, एमाले एक्लैको भने बहुमत पुगेन । मंगलबार चुनाव भएका ३२ मध्ये २९ सिटको अन्तिम मत परीणाम आइसकेको छ भने तीन सिटको गणना जारी छ । २४ सदस्य भने निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचित र निर्विरोध गरी ५३ सिटको परीणम आउँदा वाम गठबन्धनले ३६ सिट जितेको छ । जसमा एमालेको २५ सिट छ भने माओवादीले ११ सिट जितेको...
प्रदेश १ मा दलित कोटाबाट नेकपा एमालेका खेम नेपाली निर्वाचित
राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक हुन सुरु भएको छ । प्रदेश १ मा दलित कोटाबाट नेकपा एमालेका खेम नेपाली निर्वाचित भएका छन् । उनले ६ हजार २ सय ७० मत प्राप्त गरे भने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका विनकुमार विश्वकर्माको २ हजार ८ सय ३२ मत प्राप्त गरेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । अपाङ्ग र अल्पसंख्यकबाट अगम प्रसाद बान्तवा राई विजयी भएका भएका छन् । उनले ६ हजार १ सय ३८ मत ल्याएर...
राष्ट्रियसभाका ३२ पदका लागि ५२ जना प्रतिस्पर्धामा
काठमाडौं ६ वटा प्रदेशमा आज स्थायी सदन राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ । प्रदेश २ मा भने सबै निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । प्रदेश १, ३, ४, ५, ६ र ७ प्रदेशमा निर्वाचन हुन लागेको हो । राष्ट्रियसभाका ५६ सदस्य चयनका लागि हुने निर्वाचनमा २४ जना निर्विरोध भइसकेकाले बाँकी ३२ पदमा मात्र निर्वाचन हुने छ । ३२ पदका लागि ५२ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । निर्वाचनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध...
२१ माघ २०७४, बुटवल – प्रदेशसभा बैठकसँगै सरकार गठनको गृहकार्य पनि अघि बढेको छ । प्रदेश ५ मा नेकपा एमालेले शंकर पोखरेललाई संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेको छ । एमाले–माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमतिअनुसार प्रदेश ५ सहित प्रदेश १, ३ र ४ मा एमाले र प्रदेश नम्बर ६ र सातमा माओवादीले मुख्यमन्त्री पाउने सहमति भएको छ । यो सहमतिअनुसार पोखरेल माओवादीको सहयोगमा प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री चुनिदैंछन्। मुख्यमन्त्रीको टुं...
भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाल आउँदै
काठमाडौं भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज बिहीबार नेपाल आउँदै छिन् । नेपालको दुईदिने शुद्ध राजनीतिक भ्रमणमा आउन लागेकी स्वराजले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेसकेन्द्रित दलका नेतासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारतमा ...
अण्डरग्राउण्ड मनी’ एकचोटि शुद्धीकरण हुन दिने कि ?
१६ माघ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकारले मनी लाउण्डरिङ (सम्पत्ति शुद्धीकरण) सम्बन्धी नीतिमा परिर्वतन गर्न सक्ने संकेत गरेका छन् । उनले एकपटकका लागि अण्डरग्राउण्ड मनीलाई शुद्धीकरण गरेर लगानीमा लाउन सकिनेबारे सोच्नुपर्ने बताएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा हाल नेपाल सरकारले लिइरहेको नीति ‘मुसा निस्कने दुलामा साँचो थापे जस्तो’ मात्रै भएको ओलीको प्रतिक्रिया छ । न...
वाम गठबन्धनमा भागवण्डा मिल्यो, प्रदेश ६ र ७ को मुख्यमन्त्री माओवादी
१५ माघ, काठमाडौं । एमाले र माओवादीको कार्यदलले ६ वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको भागवण्डा टुंगो लगाएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच झण्डै चार घन्टा छलफल भए लगतै कार्यदलले प्रदेशको प्रमुख पद भागवण्डा टुंगो लगाएको हो । कार्यदलमा चार मुख्यमन्त्री र चार सभामुख एमालेले लिने सहमति भएको छ । माओवादीले दुई मुख्यमन्त्री र दुई सभामुख पाएको छ । तर, उपसभामुख भने ...
राष्ट्रियसभा निर्वाचन : प्रदेश २ मा सबै निर्विरोध
जनकपुर राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि प्रदेश नम्बर २ मा भएको निर्वाचनमा सबै उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। पाँच उम्मेदवार मनोनयकै दिन निर्विरोध भएको प्रदेश दुईमा आइतबार खुलातर्फ नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीबाट मोहमद अख्तर हुसैनले नाम फिर्ता लिएपछि अन्य ३ उम्मेदवार पनि निर्विरोध भएका हुन । ८ सीट रहेको प्रदेशमा खुलातर्फको ३ सीटमा ४ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो। उम्मेदवारी फिर्ता लिने अन्तिम दिन...